Ziyini amathuluzi angakulethela emuva kwe-backlink eyigugu?
Uma udala iwebhusayithi futhi ufuna ukuyifinyelela phezulu ku-injini yosesho, akudingeki nje ukukhiqiza okuqukethwe okuphezulu kodwa futhi ugxile ukunakwa kwakho nemizamo yesikimu sokwakha isixhumanisi se-savvy. Kungakhathaliseki ukuthi ungathanda ukuthola ama-backlink ephilayo nje kusayithi lakho, uthathe izimpendulo zangaphambili zompikiswano noma uthole ama-backlink akhokhelwayo, udinga ukuba nesitebhisi sokuthatha isicabangelo. Iphuzu elibalulekile lecebo lakho kufanele libe yindalo yokuqukethwe kwekhwalithi. Okuqukethwe okuningi okushicilelayo, cishe amathuba okuthola izixhumanisi ezingenayo ngokwemvelo. Noma kunjalo, empeleni, angeke ikunike isiqinisekiso sokuthi uzokwakha iphrofayli yokwakha yokuxhumanisa okuhle. Isikhathi, uma u-spammy, ama-backlink aphansi angase afake imizamo yakho ye-SEO futhi uphakamise isayithi lakho lesayithi ekhasini lomphumela wosesho, ayedlulile - logiciel bulletin de paie maroc. Njengoba i-Google ivuselelwe i-algorithm yayo yesimo, ama-backlink ogaxekile abangela umonakalo kunokuba kube nomkhankaso wokuthuthukisa iwebhusayithi. Namuhla, ikhwalithi kuphela yezixhumanisi ezingenayo zibaluleke kakhulu. Njengoba ama-backlink ehlala isici esibalulekile sendawo, kudingeka usebenzise amasu wokwakha amaxhumanisi asebenzayo kusayithi lakho. Indlela yokuxhumanisa umkhankaso wokwakha ixhomeke kuhlobo lwewebhusayithi onayo nezinhloso zebhizinisi lakho. Kungakhathaliseki ukuthi ukuma kuphi, kubalulekile ukuchitha isikhathi ukufunda okuningi mayelana ne-backlink (amathuluzi we-backlink) aklanyelwe ukukusiza ukuthi uvelise imiphumela emihle yezinga eliphezulu le-injini yokusesha.
Kulesi sihloko, uzothola amanye amathuluzi ochwepheshe angakusiza ukuba wakhe umkhankaso wokwakha umxhumanisi wokuwina futhi uthuthukise ukuqwashisa komkhiqizo wakho.
Amathuluzi wokwakha ama-Quality
. Yenzelwe labo abathengisi be-intanethi abangathanda ukuqhubeka bethola ama-backlink afanelekayo ngaphandle kokutshala imali eningi kuleso sphere sokuhlelwa kwe-off-site. Leli thuluzi linikeza abasebenzisi insizakalo yezinhlelo ezihlukahlukene ezibandakanya ukucwaninga, ukuhlaziywa kwewebhusayithi, ucwaningo lwewebhusayithi, ukulungiswa kwephutha lewebhu, ukwakha isixhumanisi, ukubuyekezwa kwe-rankings nokusekelwa kwamakhasimende. I-Semalt Auto SEO isiza ukuthola i-organic link juice evela ezigunyazayo futhi ezifanele kumawebhusayithi wakho we-market niche. Isisekelo sabo sinezigcawu ezingamaphesenti angaphezu kuka-50,000 eziphezulu ezifundweni ezihlukahlukene, yingakho leli thuluzi lizokwanelisa zonke izidingo zebhizinisi. Inzuzo eyengeziwe yalezi zinsizakalo ukuthi zonke izinqolobane ezihlanganisiwe zihlanganiswe ekuqukethwe okuyingqayizivele futhi efanelekayo futhi okungenziwa yi-Semalt professional copywriters. Ukwakhiwa kwesixhumanisi kwenziwa kancane kancane ngokwezinga: 40% - izixhumanisi zehange; Ama-50% - izixhumanisi ezingekho-anchor; Amaphesenti angu-10 - izixhumanisi zamagama wegama.
EmuvaLinker iyithuluzi elizakhela ngokuzenzakalelayo izinkulungwane ze-backlink eziphezulu zekhasi lakho lewebhu. Leli thuluzi lidala izixhumanisi zangaphandle kumawebusayithi ahloniphekile afakazwe njalo yi-bots search. Kunezinketho ezimbili ezitholakalayo ongazisebenzisa ukuhambisa amawebhusayithi akho afinyeleleke kuwebhusayithi (ama-backlink aphezulu angu-2500+) namawebhusayithi e-premium (ama-backlink aphezulu we-premium).
Hlola izixhumanisi zami
Leli thuluzi lisetshenziselwa ukukhuliswa kwe-Google Chrome. Yingakho kulula ukusebenzisa "Hlola izixhumanisi zami" isu lakho lokusesha injini yokusesha. Leli thuluzi lisiza ukukhiqiza izixhumanisi eziphezulu kakhulu ezingenayo ngosizo lokufaka izixhumanisi eziphukile eminye imithombo yewebhu. Ivumela ukusheshisa inqubo ngokusebenza njengomhloli we-backlink. Ngalesi sandiso, ungakwazi ukuskena ngokushesha noma yikuphi iwebhusayithi mayelana nezixhumanisi eziphukile.